Real Madrid Oo 5-1 Ku Dubatay AC Milan, Halka Barcelona Ay Rigoorayaal Kaga Badiyeen Man United. - jornalizem
Real Madrid Oo 5-1 Ku Dubatay AC Milan, Halka Barcelona Ay Rigoorayaal Kaga Badiyeen Man United.
Real Madrid ayaa 5-1 ku dardartay kooxda AC Milan ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday Yankee Stadium, iyagoo ku soo gabagabeeyay socdaalkooda ay ku marayaan Mareykanka.
Cristiano Ronaldo ayaa ahaa xiddiga ciyaartii ka dhacday New York City isagoo dhaliyay labo gool oo u sahashay kooxda reer Spain inay si la yaqaano u garaacaan Rossoneri.
Angel Di Maria ayaa hogaanka u dhiibay Madrid markii ay ciyaarta socotay 25 daqiiqo, lakiin Robinho ayaa u barbareeyay sideed daqiiqo ka dib, iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Si kastaba, Ronaldo ayaa qeybtii labaad labo gool u dhaliyay ka hor inta uusan madax gool kale ku dhalinin Sergio Ramos halka Jose Callejon uu ciyaarta hurdo u diray.
Karim Benzema iyo Mesut Ozil ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii uu ku soo bilaabay Mourinho, kaasoo la soo shirtagay line-up xoogan, iyadoo daafaca 22 jirka Nacho uu ah ciyaaryahanka kaliya ee aan looga baran line-upka Madrid.
Massimaliano Allegri ayaa raacay line-upkiisa caadiga ah, isagoo ciyaaray inta badan ciyaartoyda joogtada ah, iyadoo Kevin-Prince Boaten uu ka danbeeyay weerarka Robinho iyo Antonio Cassano.
Dhinaca kale Manchester United iyo Barcelona ayaa ku kala baxay barbaro 0-0 ah ciyaar ay ku ciyaareen Gothenburg Sweden iyadoo Wayne Rooney uu qeybtii ah ka qasaariyay rigooe, islamarkaana United looga badiyay rigoore.
Labada kooxood ayaa ku soo shir tagay line-up xoogan ciyaartoodaan saaxiibtinimo oo tikadhada garoonka lagu iibsaday 45 daqiiqo gudaheed, waxaana kubada lagu keenay helicopter, iyadoo buler lagu sharaxay cirka ka dib markii ay ciyaarta dhamaatay.
United ayaa ku soo dartay line-upkeeda Nemanja Vidic, iyadoo Wayne Rooney iyo Danny Welbeck ay ka ciyaarayeen afka hore, halka wiilasha cusub Shinji Kagawa iyo Nick Powell ay ku bilowdeen kursiga keydka.
Dhanka Barcelona waxa ay la soo shirtageen ku dhawaad line-upkooda buuxda, iyadoo Carles Puyol uu kula biiray line-upka Andres Iniesta, Lionel Messi iyo Alexis Sanchez, halka David Villa uu ka mid ahaa ciyaartoyda keydka.
Inkastoo dadkii ciyaarta daawanayay ay daawadeen kubado weerar ah hadana labada kooxood waqtigii 90ka daqiiqo ma aysan soo taaban shabaqa, waxaana ay isla aadeen rigoore.
Nani ayaa marka hore ka qasaariyay United, iyadoo Xavi uu Barcelona u dhaliyay, ka hor inta uusan Ashley Young hadana rigoore kale ka qasaarin Man United, waxaana rigoorada guusha u dhaliyay Gerard Pique.